ခရစ်စမတ်သီချင်းတစ်ပုဒ် ၏ ဇာတ်လမ်းအစမှာ လန်ဒန်မြို့ ခရစ်စမတ်နေ့မရောက်မီ အလွန်ချမ်းအေးသော ညနေခင်းကာလဖြင့် အစပြု၍ ထိုနေ့သည် စခရုဂျ်၏ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဂျေးကာ့ဘ် မားလီ သေဆုံးသော ခုနစ်နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်းဖြစ်သည်။ အရွယ်ထောက်ကာ ကပ်စေးလည်းကုပ်သော စခရုဂျ်သည် ခရစ်စမတ်ကာလကို လွန်စွာမနှစ်မြို့သူဖြစ်သည်။ ထိုနေ့၌ ၎င်း၏ ကွယ်လွန်ပြီဖြစ်သောညီမ၏ သား၊ တူတော်သူ ဖရဒ်က ခရစ်စမတ်ညအတွက် အတူစားသောက်ရန် ဖိတ်ကြားမှုကို ငြင်းဆန်လိုက်သည်။ သူဆင်းရဲများအတွက် အစားအသောက်နှင့် အနွေးဓာတ်ထောက်ပံ့ရန် အလှူလာခံသောသူနှစ်ဦးကို မလှူနိုင်ဟု ငြင်းဆိုလွှတ်ကာ သူ့ဆီတွင် အလွန်အလုပ်လုပ်ရရှာ၍ လစာနည်းသော ဘော့ဘ် ခရတ်ချစ် (Bob Cratchit) ခေါ်သော စာရေးကို လူမှုရေးအရ ခရစ်စမတ်နေ့ကို အားလပ်ရက်အဖြစ် ငြူငြူဆူဆူဖြင့်သာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
မျက်မှောက်ခရစ်စမတ်တစ္ဆေသည် ဒုတိယမြောက် လာရောက်တွေ့ဆုံသောသူဖြစ်ပြီး စခရုဂျ်ကို ခရစ်စမတ်ညစာပြုလုပ်ရန် ဝယ်ခြမ်းနေကြသော လူများဖြင့် စည်ကားနေသည့် ပျော်ရွင်ဖွယ် ဈေးတစ်ခုဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် သတ္တုတွင်းတူးသူ၏ တဲအိမ်လေးနှင့် မီးပြတိုက်တစ်ခု စသည်တို့၌ ခရစ်စမတ်ကျင်းပပုံမြင်ကွင်းတို့ဆီသို့လည်း ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ စခရုဂျ်နှင့် တစ္ဆေတို့သည် ဖရဒ်၏အိမ်၌ ခရစ်စမတ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲပြုလုပ်နေသည်ကိုလည်း လိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့ကြ၏။ ဤအခန်း၏ အဓိကအပိုင်းသည် ဘော့ဘ် ခရတ်ချစ်မိသားစု၏ ညစာ စားပွဲပင်ဖြစ်ရာ ဤအခန်း၌ ခရတ်ချစ်၏ အငယ်ဆုံးသားလေး တိုင်နီ တင် ကို မိတ်ဆက်ဖော်ပြထားကာ တိုင်နီ တင်လေးသည် မကျန်းမာသူ (ဒုက္ခိတကလေး) ဖြစ်၏။ သို့သော် ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေတတ်သော ကလေးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်လေသည်။ တစ္ဆေကြီးက လက်ရှိသွားနေသည့် အဖြစ်အပျက်လမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲမှုမရှိပါက တိုင်နီ တင်လေး သေဆုံးရမည်ဟု သတင်းပေးပြောခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် တစ္ဆေကြီး မပျောက်ကွယ်ခင် စခရုဂျ်ကို ၎င်း၏ဝတ်ရုံအတွင်း ဖွက်ထား၍ ပိန်ချုံးချိနဲ့နေသော ကလေးနှစ်ဦးကို ပြသခဲ့ပြီး ကောင်လေး၏အမည်မှာ မသိခြင်း (Ignorance) နှင့် ကောင်မလေးကို လိုချင်တပ်မက်ခြင်း (Want) ဟုခေါ်ဆိုကြောင်း ပြောဆိုရင်း အထူးသဖြင့် ကောင်လေးကို သတိထားရန်နှင့် ထိုကောင်လေးကို မသိကျိုးကျွန်ပြုသူများ ကြမ္မာငင်ရလိမ့်မည်ဟု သတိပေးခဲ့ကာ ထိုကလေးနှစ်ဦးအတွက် စိုးရိမ်သောကဖြစ်နေရှာသော စခရုဂျ်ကိုလည်း တစ္ဆေကြီးက လှောင်ပြောင်ပျက်ရယ်ပြုခဲ့လေသည်။
တတိယမြောက်တစ္ဆေသည် အနာဂတ်ခရစ်စမတ်တစ္ဆေဖြစ်သည်။ စခရုဂျ်အား အနာဂတ်တွင်ဖြစ်မည့် ခရစ်စမတ်နေ့ဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွား၏။ လူအများမုန်းတီး မနှစ်မြို့ခြင်းခံရသောသူတစ်ဦး၏ ဈာပနပွဲဖြစ်ပျက်ပုံများကိုပြသရာ နေ့လည်စာကြွေးသောကြောင့်သာ ထိုသေသူ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနည်းငယ်မျှ တက်ရောက်သော မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းရေးအမျိုးသမီး၊ အဝတ်လျှော်သူအမျိုးသမီးနှင့် ထိုအရပ်က သုဘရာဇာတို့သုံးဦးသား သေသူ၏ ဥစ္စာပစ္စည်းများကို ခိုးယူ၍ ခိုးရာပါပစ္စည်းဝယ်သူထံ ရောင်းချနေပုံများကို ပြသပေးသည်။ ထိုသူသေဆုံးမှုအပေါ် စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုခု ရှိသူများ ရှိလျှင် ပြသပေးပါရန် စခရုဂျ်က တောင်းဆိုသောအခါ တစ္ဆေကြီးက ဆင်းရဲသားဇနီးမောင်နှံ၏ စိတ်သက်သာယာရရှိမှုကိုသာ ပြသပေး၏။ ထိုနှစ်ယောက်မှာ အဆိုပါသူသေဆုံးသွားသည့်အတွက် ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာ ခေတ္တခဏမျှ ပြေလည်သွားသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ အခြားသေဆုံးမှုတစ်ခုရှိပါက ထိုသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့စာနာတတ်သော သဘောကို မြင်တွေ့လိုပါသည်ဟု ထပ်မံတောင်းဆိုရာ တစ္ဆေကြီးက တိုင်နီ တင်လေး ကွယ်လွန်သဖြင့် ပူဆွေးနေသော ဘော့ဘ်ခရတ်ချစ်နှင့် ၎င်းမိသားစုကို ပြသပေးခဲ့ပြီး "Ebenezer Scrroge" ဟု နာမည်ရေးထိုးထား၍ စွန့်ပစ်လစ်လျူရှုထားသည့် အုတ်ဂူဆီသို့ ခေါ်ဆောင် ညွှန်ပြပေးခဲ့လေသည်။ အစောပိုင်းသေဆုံးသူမှာလည်း သူကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားကာ ငိုရှိုက်၍ ၎င်း၏မိုက်ပြစ်များကို ပြုပြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခရစ်စမတ်ကာလကို တန်ဖိုးထားမည်ဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် တောင်းပန်ခယ ပြောကြားခဲ့သည်။
ခရစ်စမတ်နေ့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ မနက်စောစော၌ စခရုဂျ်သည် အစစအရာရာပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည့် လူသစ်အသွင်ဖြင့် နိုးထလာခဲ့သည်။ ယမန်နေ့က ၎င်းငြင်းလွှတ်လိုက်သည့် အလှူလာ၍ခံသောသူများကို ငွေကြေးများစွာ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏စာရေး ခရတ်ချစ်အိမ်သို့ ခရစ်စမတ်ညစာအဖြစ် ကြက်ဆင်ကြီးတစ်ကောင်ကို ၎င်းပေးမှန်း မသိစေဘဲ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကာ ထို့နောက် တူတော်သူ ဖရဒ်နှင့် မိသားစုထံသို့ နေ့လည်ပိုင်း၌သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ရက်တွင် ခရတ်ချစ်ကို လစာတိုးပေးပြီး တိုင်နီ တင် ဟုခေါ်သော မကျန်းမာရှာသည့် ကလေးလေး၏ ဖခင်သဖွယ်အဖြစ်လည်း စိတ်သစ်လူသစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှအစပြု၍ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်၏ အငွေ့အသက်များ လွှမ်းခြုံကာ လူတိုင်းအပေါ် ရက်ရက်ရောရော၊ ကြင်ကြင်နာနာ၊ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဆက်ဆံခဲ့လေတော့သည်။
"ခရစ်စမတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်" ကို ရေးသားရာတွင် စာဖတ်သူများ၏ နှလုံးသားများကို စီးပွားရေးဆိုသော လှေကားကြီး၏ အနိမ့်ဆုံးလှေကားဆန်ပေါ်မှာ တည်မှီရုန်းကန်နေရတဲ့သူများဆီသို့ အရောက်ပို့ဆောင်ရန်နှင့် စေတနာသဘောကို လက်တွေ့ဖော်ဆောင်ဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထိုမျှမကသေးဘဲ ဆင်းရဲသားများအကြား ဧကန်စင်စစ်ရှိသော အလိုဆန္ဒနှင့် ၎င်းတို့၏ ပညာအသိမဲ့ခြင်းကို သည်းခံရခြင်းက ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်ရောက်ရှိလာသည့် ဆိုးရွားလှသော အန္တရာယ်ကိုလည်း သတိပေးရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။
ဒစ်ကင်းက ခရစ်စမတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်သည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ အထူးအားဖြင့် ကလေးသူငယ် မွဲတေမှု အပေါ်ထားသော ဗြိတိသျှတို့၏ လူမှုရေးအမြင်များကို တုံ့ပြန်သောအနေဖြင့်၊ ထိုအမြင်များကို ဆန့်ကျင်၍ ၎င်း၏တစ်ဖက်မှ ငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုကို တင်ပြသောအနေဖြင့် ရေးသားထားခဲ့သည်။ ကိုယ်ကျိုးအတ္တနှင့် ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားများကို လျစ်လျူရှုခြင်းက ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော ဝဲဂယက်အကျိုးဆက်များအတွက် အလွန်ကောင်းသော ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် ဤဇာတ်လမ်းက စခရုဂျ်ကို ပြသပေးသည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွင် အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်များ ဆင်းရဲခြင်းကို ပုံဆောင်ခိုင်းနှိုင်းမှုသဘောအားဖြင့် "လိုချင်တပ်မက်မှု" (Want) နှင့် "မသိမှု" (Ignorance) ဟူ၍ ဇာတ်ကောင်စရိုက်သွင်းကာ ရေးသားဖော်ကျူးထားလေသည်။ တိုင်နီတင် ကဲ့သို့ပင် ဤဇာတ်ကောင်နှစ်ခုကိုလည်း စာဖတ်သူများ စာနာစိတ်ဖြစ်စေရန် ဖန်တီးထားသည်။ ဒဂ်လာ့စ် ဖဲဟာ့စ်တ်က ဤသို့ဇာတ်ကောင်များအသုံးပြုခြင်းသည် ၎င်း၏ လူမှုအလတ်တန်းစား စာဖတ်ပရိတ်သတ်များနှင့် မကင်းကွာစေဘဲ အလှူအတန်းပြုရန် လိုအပ်ပါသည်ဆိုသော သတင်းစကားကို တင်ပြရန်အတွက် ဒစ်ကင်းကို အခွင့်ပေး၏ဟု ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့သည်။
လက်ခံ ဝေဖန် တုံ့ပြန်မှုများပြင်ဆင်
ပါလီ၏မူ ထုတ်ဝေအပြီး နှစ်ရက်မြောက်တွင် ဒစ်ကင်းက မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် တရားစွဲဆိုရာ အနိုင်ရခဲ့သည်။ ထုတ်ဝေသူများက ဒေဝါလီခံကြောင်း ကြေငြာခဲ့၍ ဒစ်ကင်းကို (တရားရုံး)ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ပေါင် ၇၀၀ ပေးစေသည်။ ဝတ္ထုမှရသော အမြတ်နည်းပါးသောကြောင့် ထုတ်ဝေသူများနှင့်လည်း ဆက်ဆံရေးတင်းမာခဲ့လေသည်။
၁၈၄၉ အရောက်တွင် ဒစ်ကင်းသည် "ဒေးဗစ်ကော်ပါဖီးလ်ဒ်" ဝတ္ထုကို ရေးသားနေ၍ အခြားခရစ်စမတ်နှင့်ပတ်သက်သော စာအုပ်ထုတ်ရန် အချိန်၊ ဆန္ဒမရှိခဲ့ချေ။  ဤဝတ္ထု၏အတွေးအခေါ်ကို ပရိတ်သတ်ဆီ အရောက်ပို့ရန် အကောင်းဆုံးနည်းမှာ အများပြည်သူကြား ဖတ်ရှုပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၁၈၅၂ ခရစ်စမတ်ကာလအတွင်း ဘာမင်ဟန်မြို့တော်ခန်းမ၌ စက်မှုနှင့်စာပေအဖွဲ့အစည်းသို့ ဖတ်ကြားပေးမှုတစ်ခု လုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ ထိုသို့ဖတ်ကြားခြင်းသည် အလွန်အောင်မြင်ခဲ့၏။ ထို့နောက် ၎င်းသေဆုံးသော ၁၈၇၀ ရောက်သည်အထိ ဇာတ်လမ်းဖတ်ကြားပေးမှု (၁၂၇) ကြိမ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဒေးဗစ်က ခေတ်အဆက်ဆက် မှီငြမ်းပုံဖော်တင်ဆက်ခြင်များစွာ၌ အပြောင်းအလဲများကို အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့၍ ဇာတ်လမ်း၏ အလေးပေးမှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဇာတ်ကောင်ပြောင်းလဲခြင်းများသည် ခေတ်တစ်ခေတ်၏ အဓိကအတွေးအခေါ်ပုံစံကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်ဟု သုံးသပ်သည်။ ဒစ်ကင်းရှိစဉ် ဝိတိုရိယခေတ် ပရိတ်သတ်များက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သို့သော် လောကီပုံဆောင်ဇာတ်လမ်း အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းသို့ရောက်သော် ဇာတ်လမ်းသည် ကလေးပုံပြင်ဖြစ်သွားခဲ့၍ မိဘများက ၎င်းတို့ငယ်စဉ်က ၎င်းတို့အဖေ၊ အမေများဖတ်ပြခဲ့သည်ကို အမှတ်ရကြသဖြင့် ကလေးသူငယ်များကို ပြန်လည်ဖတ်ပြခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးဖြစ်ခါနီးနှင့် ဖြစ်ပွားချိန်အတွင်း ဇာတ်လမ်းသည် အရင်းရှင်ဝါဒကို ရှုတ်ချခြင်းဖြစ်၍ အများစုက ဖိနှိပ်ခံထားရသော စီးပွားရေး အရှိတရားများမှ လွတ်မြောက်သည့်နည်းလမ်းအနေဖြင့် ဖတ်ရှုခဲ့ကြသည်ဟု ဒေးဗစ်ကပြောဆိုသည်။ ၁၉၃၀ နှစ်များ၌ ယူအက်စ်နှင့် ယူကေတို့တွင် ဤဇာတ်လမ်း၏ ရုပ်ရှင်ပုံစံများမှာ မတူညီကြပေ။ ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်များက မိရိုးဖလာ ဇာတ်လမ်းပြောသည့်ပုံစံဖြင့် တင်ဆက်ကြသော်လည်း အမေရိကန်လက်ရာများက ခရတ်ချစ်ကို အလေးပိုထား၍ ဥရောပဘဏ်သမားများက ဖြစ်စေသော ပျက်ကပ်ကို လွတ်မြောက်၍ သာမန်သူတစ်ဦး၏ ခရစ်စမတ်ကျင်းပခြင်းကို အလေးပေးထားသည်ဟု ဒေးဗစ်ကပင် ဆက်လက်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀နှစ်များတွင် စခရုဂျ်ကို ပုံဖော်ရာ၌ ၎င်းသည် မသိစိတ်ကလှုံဆော်ခံရသော ပုံစံဖြင့်ဖြစ်၍ မိမိ၏ အတိတ်နှင့် နပမ်းလုံးနေရသော သူအဖြစ် တင်ဆက်ကြသည်။ ၁၉၈၀ နှစ်များရောက်သော် စခရုဂျ်ကို စီးပွားရေးပျက်ကပ်ကမ္ဘာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မသေချာမရေရာမှု ကမ္ဘာ၌ ရုပ်လုံးဖော်ထားတင်ဆက်ကြခဲ့သည်။
↑ In 1875 Mitton sold the manuscript to the bookseller Francis Harvey – reportedly for £50 (equal to £Error when using &#၁၂၃;&#၁၂၃;Inflation&#၁၂၅;&#၁၂၅;: &#၁၂၄;index&#၆၁;UK (parameter ၁) notarecognized index. in ၂၀၂၁ pounds) – who sold it to the autograph collector, Henry George Churchill, in 1882; in turn Churchill sold the manuscript to Bennett,aBirmingham bookseller. Bennett sold it for £200 to Robson and Kerslake of London, which sold it to Dickens collector Stuart M. Samuel for £300. It was purchased by J. Pierpont Morgan for an undisclosed sum and is now held by the Pierpont Morgan Library, New York.
သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများပြင်ဆင်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခရစ်စမတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်&oldid=647907" မှ ရယူရန်
၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။